पारस र हिमानी शाहकी छोरी पूर्णिका हिमानी भन्दा पनि सुन्दर छिन (हेर्नुहोस् तस्बिरहरू)
काठमाण्डौ । नेपालकी सुन्दर महिलाको सूचिमा पर्ने एउटा नाम हो हिमानी शाह सायद नचिन्ने कमै हुनुहुन्छ होला । पुर्वराजकुमार पारसकी पत्नी हिमानी शाह हुन् र पूर्णिका पुर्वराजकुमार र हिमानी शाह कि छोरी हुन् । हिमानी साह र पारस शाहको कोखबाट १ छोरा र २ छोरी छन् ती मध्यकी जेठी छोरी हुन् पूर्णिका जुन हिमानी शाह भन्दा कम छैनिन् । उनी अहिले निक्कै जवान भइसकेकी छिन् उनी उनकी आमा हिमानी शाह भन्दा पनि आकर्षक भएकी छिन । हिमानी शाहकी जेठी छोरी पूर्णिका आजभोली सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय हुन थालेकी छन् ।…
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्रकी अभिनेत्री रेखा थापा हिन्दु राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जुटेकी छिन् । चलचित्रबाट राजनीतिमा, पूर्व माओवादीबाट राप्रपा संयुक्तमा पुगेकी अभिनेत्री थापा हिन्दु राष्ट्र जागरण अभियानका लागि जनकपुर पुगेकी छिन् । राप्रपा संयुक्तले सबै धर्मबिच समानता, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु मुलुक बनाउन जनकपुरबाट धार्मिक जागरण अभियान सुरु गरेको छ। धार्मिक जागरण अभियानमा पुगेकी थापाले अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको हात नै समातेर हिँड्न थालेकी छिन् । अभियानमा राप्रपा संयुक्तका नेताहरू राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी सहभागी छन् । केन्द्रीय नेताहरू पुगेको हिन्दु जागरण अभियानमा रेखाले अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको…
कमलाको घिमिरेको पहिलो गीत युट्युब ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा…(भिडियो सहित)
काठमाडौँ, २९ कार्तिक । पहिलो दोहोरी गीत बाटै एकाएक भाइरल बनेकी बाल गायिका कमला घिमिरेको ‘चिया छानेको’ बोलको गीत दुइ दिन पहिले मात्र युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक भएको २ दिनमै उक्त गीत अहिले युट्युब ट्रेण्डिङको पहिलो नम्बरमा परेको छ । गितलाई १३ लाख भन्दा धेरै पटक हेरिएको छ । शुभारम्भ डिजिटल म्युजिक नामक युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त गितमा कमला घिमिरे सँगै अमृत सापकोटाले आवाज दिएका छन्। सापकोटालेनै कमलालाई मिडियामा ल्याएका थिए। गीतमा नेपालका चर्चित/चर्चित मोडलहरूले नृत्य समेत गरेका छन् । शङ्कर बिसीको निर्देशन रहेको भिडियो को…
काठमाण्डौ । चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाकि पत्नी तथा अनुराग फिल्मकि नायिका एलिजा गौतम अहिले क्यानडामा रहेकी छिन ।उनी केही महिना अगाडी छोरी एरिकाको उपचारको लागि क्यानडा पुगेकी हुन् । एलिजा गौतमले सामाजिक सञ्जालहरूमा निरन्तर रूपमा तस्बिरहरू सार्बजनिक गर्दै आइरहेकी छिन । नेपालमा फिल्म फ्लप भए पनि उनको सुन्दरताको भने निकै चर्चा हुने गरेको छ । समाजिक संजालमा सक्रिय रहेकि एलिजाले हट एंड बोल्ड तस्बिरहरु सार्वजनिक गर्दै आएकि छिन् ।छोरी एरिका धमला गौतमको हात राख्न एलिजा दुई वर्षको लागि क्यानडा पुगेकि हुन् । एरिकाको जन्मजात नै बायाँ हात छैन । उनको…
पुरुष होस् या महिला यी ४ काम सकेपछि नुहाउनुपर्छ : जानिराखौ ! प्राय जसो मानिस हरु बिहान उठेपछि फ्रेस हुनको लागि नुहाउने गर्दछन ! तर चाणक्यले भने केहि त्यस्ता अवस्थाहरु बताएको छ कि यी काम गरिसकेपछि नुहाउनै पर्छ ! चाणक्य का अनुसार स्त्री होस् या पुरुष दुबैको स्वास्थ्य को लागि नुहाउने पर्छा ! चाणक्य नियम का अनुसार यी चार काम गरिसकेपछि नुहाउनै पर्छ जानिराख्नुहोस ! तेल मालिश गरेपछि नुहाउनुपर्छ चाणक्यले बताएअनुसार स्वस्थ शरीर र चमकदार छालाका लागि हप्तामा कम्तीमा एकपटक पुरा शरीरमा तेल मालिश गर्नुपर्छ । तेल मालिशपछि शरीरमा भएका…